Gamaaggama/Marii OPDO Bitootessa 17 fi 18,2016 geggeeffamaa jiru OPDO ilee Oromoo ilee hin fayadu. Ummani Oromoo seera biyyatin ala bulchisa Militeri jala maliif bula ga'ee OPDO mal ? jeechuu qabuu turn.
Dhaabni maxxannee wayyaanee OPDOn ajaja gooftoliin ishee TPLF itti laateen Bitootessa 17,2016 magaalota Oromiyaa adda addaa kan akka Finfinnee, Adaamaa, Naqamtee, Jimmaa fi bakkoota dhibiitti of gamaaggamuu akka jalqabde jirti.
Gamaaggamni akka dhaabaatti OPDO keessatti geggeeffamuu jalqabe kun dantaa ummata Oromoo tiksisiisuu fi gaaffilee mirgaa fi abbaa biyyummaa ummatni Oromoo belbelchaa jiruuf deebii sirnaa kennuuf osoo hin taane, karaa ittiin caalaatti dura dhaabbatanii fi amanamummaa isaanii gooftolii isaanii wayyaaneef qaban ittiin mul’isan akka ta’e ibsamaa jira.
Haa ta’u malee sabboontotni OPDO keessaa fi warraaqsi ummata Oromoo jabaachuu irraa sagalee ummatichaa dhaggeeffachuuf murteeffatan OPDO keessa jiran garee Muktaar Kadirfaa warra wayyaaneef gugguufanii ummata Oromoo irratti yakka raawwachuu itti fufuu murteeffatan dura dhaabbatanii falmuu fi ittiin mormuu itti fufaniiru. Gamaaggama/marii miseensotni OPDO bakka adda addaatti itti jiran keessaa kan guyyaa kaleessaa Bitootessa 17,2016 Finfinnee Galma Aadaa Oromootti ta’e haga tokko kan arganne akka armaan gadiitti isinii dhiheessina.
Oolmaa marii haala naannoo Oromiyaa irratti waltajjii cufaadhaan Bitootessa 17,2016 Finfinnee Galma Aadaa Oromootti geggeeffamaa ture irratti kaabinootni gaaffilee hedduu kaasaa akka turan barameera.
Gaaffilee kanneen keessaas:
1. Sochii amma Oromiyaa keessa jiruun hogganoota OPDO hojii irraa ari’uun ummata Oromoof deebii ta’uu ni danda’aa?
2. Oromiyaan hanga yoomiitti humni ittisa biyyaatiin eegamti? Kun osoo ibsi itti kennamee?
3. Rakkoo amma Oromiyaa keessa jiru hiikuudhaaf kallattii mootummaan itti deemaa jiru sirriidhaa? Yoom iyyuu ummata qawweedhaan tasgabbeessuun hin danda’amu.
4. Afaan Oromoo akka gosa barnootaa tokkootti (akka subject tokkootti) manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran hundatti maaliif hin kennamu?
5. Manni barnootaa Afaan Oromoo itti baratamu kan ijaaramaa jiru kaayyoo yaadameefiif oolaa hin jiru. Maqaa nama dhuunfaatiin moggaafamaa jira. Inni ijaarames 1-8 osoo hin taane, kutaa 9 ol kan itti baratamuu dha. Kun maaliif ta’e?
6. Qonnaan bulaa Oromoo naannoo Finfinnee lafti qonnaa gaafa irraa fudhatamu karemeetira tokko qarshii 33n herregamaaf. Abbaa qabeenyaatti gaafa gurguramu garuu karemeetirri tokko qarshii kuma 33. Garaagarummaan kun maaliif ta’e?
7. Heera mootummaa keessatti fayidaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu keewwata 49ffaan maaliif hanga yoonaatti hojii irra hin oolle? Rakkoo mootummaa naannoo Oromiyaa ti moo qaama dhimmi kun ilaallatutu hojii irra oolchuu dide? Heerri kun har’a bahe miti; waggoota 20 ol lakkoobsisee jira; hojii irra oolchuuf maaliif seera itti baasna jedhama??
8. Maqaa Investimentiin qonnaan bulaan lafa isaa irraa buqqa’ee hojii dhabee magaalaa keessa jooru hedduu dha. Waardiyyummaallee qacaraa hin jiran. Saba kan biraa diidaa fidanii lafa Oromoo irratti qacaraa jiru; kun maaliif ta’e? kunis ummata mufachiisee jira. OPDOn maal hojjetaa jiraa????
9. Fincila ummataa kana gonkumaa duubatti deebisuu hin dandeenyu akka kanaan duraa. Saba kana sobaan bira darbuu hin dandeenyu; dhugaa jiru lafa keenyee, dhiifama gaafannee ifatti araarfachuu qabna. Kana ta’uu baannaan umriin dhaaba kanaa dhumatee waan jiru hin fakkaatuuyii??
10. OPDOn dhaaba aantummaan ummataa keessaa badaa jiruu dha. Dhaaba fayidaa mataa isaa qofa eeggatu maaliif ta’e? kan jedhuu fi kkf gaaffilee hedduun walgahii OPDO Galma Abbaa Gadaatti geggeeffamaa jiru irratti roobaniiru.
Guyyaa har’aa Bitootessa 18,2016tti ammoo mata dureelee armaan gadii irratti mariin akka geggeeffamu hubatameera. Mata dureeleen kunniinis:
1. Ummatni gocha keenya jibbe moo dhaaba keenya jibbe?
2. Rakkoo uumame kana attamitti ilaalaa jirra? Ka’umsa kanaaf sababaa kan ta’e eenyu? Mormitoota moo?, ABO moo?…..abbaan rakkoo kanaa eenyu?
3. Walmakiinsi tooraa dhaaba OPDO keessa jira moo hin jiru?
4. Rakkoo ammaa kana keessaa bahuu ni dandeenya moo hin dandeenyu? Yo dandeenye akkamitti….? kan jedhanii fi mata dureeleen biroon ka’anii irratti ni mari’atamu.
OPDO utuu dhuguma mirga uumata Oromoo kabachisuu mirga dhabba OPDO ilee kbachisuuf utuu ta’ee marii ku n kan ta’uu qabuu rakkoo kana gadii irrati mariachuu qaba ture: Mootuuman TPLF Paarlamaa isaa irrati Kara Mumichaa Ministera Haile Mariam Desalenyi, Jeequmasa Oromiyya keessati dhalateef gutuman gututi 100% baleeesan kan Mootumma biyyati ta'uu fudhatee jira. Mootummaan Ethiopia kana amane fudhachuu isaa qamoolee Adunya hundi UN, EU, AU, kkf fi dhabbileen mirga dhala namaf falman hundi dhaga'an jiru, warii hin dhaga'iin yoo jirtan dhaabilee Oromoof Haawwasi Oromoo dhageesisuu qaba. Kun waan ta'eef guyya gaafa sun kasse Abbooti Alanga, Abbootin Seera fi Polisiin biyya mirga uumataa kabachisuun dirqama isaan ture:
1. Jeequmsan walqabatee kan hidhaman hundi atataman gadii dhifamuu qabu ?
2. Baratoon hidhaman fi Barumsa irra ari'ataman hundi barumsaati deebiyuu qabuu, Universityn hundi ibsa kana irrati hunda'ee bartoota deebisuu qaba ?
3. Lubu badee hunda guman kafalamuu qaba ?
4. Qabeenya uumata barbadayeef Mootumman kafalti basuu qaba ?
5. Namoota Qama hiratan fi Yaalaman basiin isaani hunda fi midhama isaan irra hanga fayyanti gargarsi goodhamuuf qaba ?
6. Kan hojii irra ar'ataman hojii isaanti deebiyuu qabuu?
7. Kan qe'ee isaan irra buqa'aan rakko tokko malee qe'ee isaanti deebiyuu qabuu?
8. Waraana seerna ala Oromiyaati boba'ee atataman Oromiyaa keessa ba'uu qaba?
9. Agaziin Oromoo ajeessa ba'ee fi warii isaan bobasee mana murtiti dhiyachuu qabuu?
10. Jeequmsa kanaaf warii sababa ta'aan akka Abayi Teshaye, Dr. Debirasiyon G/mika'el, Samora Yenus, Getachew Aefa, Azebi Mesfin kkf kan harka keessa qaban hundi agnoo gadii dhisan mana murtiti akka dhiyatan?
11. Bulchisoon Annaa, Zooni fi Oromiyaa keessa kan uumata darara fi sama turan hundi angoo uumataf akka gadii dhisa? Gaafilee rakkoo uumata fi mirga Ummata kabachisuu qaban kana irrati xiyeefachuu qaba ture. Erga badiin Kan Mootummaati ta'ee Ajeejechan, hidhan, fi dararami Oromiyaa keessati deema jiruu maliif hin dhabatuu? Ummani Oromoo seera biyyatin ala bulchisa Militera jala maliif bula ga'ee OPDO mal jeechuu qabuu turn.
Walumaagalatti mariin kun haa geggeeffamu malee gudunfaa irra hin ga’amne; gaaffilee ka’aniifis deebiin hin kennamne. TPLF OPDO diguuf, Oromiyaa ilee Federala jala galchuuf qoophi akka qabduu OPDO beekuu qabuu turen, OPDO garuu yoomi ilee guyuma tokko uumata Oromoof utuu gartuu hin argisisn hin falamatiinfi du’ee kun nama dhala nama tokko irra kan egamuu miti.
Mada B/O SBO